नेपाली कलाकारितामा एक उदयमान प्रतिभावान कलाकार नविन संगीत बावु । – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
अशोज ६, २०७५ १४:२८ मा प्रकाशित
काठमाडौ ः कर्णालीको पानी सलल बोलको गीत अडियो– भिडियो सार्वजनिक गरेर श्रोता र दर्शकको मन जितिरहेका गायक नविन संगीत। प्रवासमा व्यस्त जीवन बिताइरहेका नविनले केही समय अगाडि मात्र कर्णालीको पानी सलल बोलको भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए । प्रवासमा बसेर सृजनामा लाग्नु अत्यन्तै गाह्रो हुदाहुदै पनि नविनले आफुभित्रको जुनुनलाई त्याग्न नसकेको बताए । दैलेखको भैरबी गाउँ पालिका ३ मा जन्मिएका उनको रुचि गायन तथा संगीत र शब्द सिर्जनामामा रहेको थियो । उनै नविन संगीत सगँ सहकर्मि साथी बविता बस्नेतले गरेको संक्षित कुराकानी ।
गीत–संगीतमा कसरी प्रवेश गर्नु भयो ?
मेरो गीत संगीतमा लाग्ने रहर चै जब म बुझ्न र हिड्न थाले त्यो बेला बाटै हो। रेडियो अनि क्यासेटहरूमा गीत बज्थ्यो, म सोच्थे कि कसरी यो गीत बन्छ भनेर । बिस्तारै म ठुलो भए र मैले आफैले रेडियो किने त्यसपछिको पहिलो मेरो गीत संगीतमा रुचि अति नै बढाउने चाहि त्यहि रेडियो नै हो । म अगामि दिनमा दर्शक स्रोता हरुको माग बमोजिम नै गीत ल्याउनेछु ।
मेरो खास बिधा भनेको केही छैन । म कता हो कता ? चर्चित हैन । यो नै बिधा मेरो भन्न मिल्दैन । किनकी म भनेको गीत संगीतमा केही नै गरेको छैन । मैले १०० मा ९५५ अझै सिक्नु छ । त्यसैले यो हो भन्न मा सक्दिन । तर सानै बाटको गीत संगीतको साधनामा नै रहेर आफनो कलाकारिताको यात्रालाई अगाडि बढाउने सोचमा रहेको छु ।
गायनमा पनि गर्नु हुन्छ कतिको सजिलो महशुस गर्नुभएको छ ?
मैले नै शब्द रचना र संगीत पनि मैले नै गरेको हुदाँ मैले रहरको कारणले होला निकै सजिलो महसुस गर्ने गरेको छु । आजको दिन सम्म मेरो प्रतिभा लाई सबैले मन पराउनुभएको छ ।
क्षेत्रमा भविष्य छैन भन्छन नी ?
तपाइँ अब आउने र आउदै गरेका नब कलाकारहरुलाई के संदेश दिनु हुन्छ ?
आगामी दिनमा पनि नेपाली लोक गीतको विकाश एव्म विस्तारका लागी आफना सर्वाेकृष्ट रचनाहरु आम दर्शक माझँमा ल्याएर । नेपाली लोक गीतको क्षेत्रमा केही गर्ने विचार छ ।
नविन जी तपाईको निकै ब्यस्त समयका बाबजुत पनि हामीलाई आफनो महत्वपुर्ण समय दिनु भयो त्यसका लागी धन्यवाद ।
बविना जी तपाईले पनि , मलाई आफनो मनमा लागेका कुराहरु तपाईको लोकप्रिय अनलाइन मार्फत भलाकुसारी गर्ने समय दिनुभएको मा हार्दिक नमन ब्यक्त गर्दछु ।